किन बढ्दैछ पशु विज्ञानमा विद्यार्थीको आकर्षण? – Newsviewsnepal.com
किन बढ्दैछ पशु विज्ञानमा विद्यार्थीको आकर्षण?
By newsview	 Last updated Jan 5, 2018
मंगलबारे, इलाम, २१ पुस । प्राविधिक विषयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको छ । प्राविधिक विषय अध्ययन गरेर चाँडो जागिर पाउनका लागि पनि विद्यार्थीको यसतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दै गएको हो ।
इलाम नगरपालिका–१ स्थित साँखेजुङमा रहेको रत्नकुमार वान्तवा पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युटमा पशु विज्ञान विषयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या अघिक छ । पढाइ शुरु भएकै पहिलो वर्षमा विभिन्न जिल्लाबाट विद्यार्थी यहाँ अध्यन गर्न आएका छन् । हेटौँडामा बसेर पढ्दै गरेका सागर श्रेष्ठ उक्त विषय अध्ययनका लागि साखेजुङ आउनुभएको छ । उहाँ प्राविधिक विषय नै अध्ययन गरे चाँडो जागिर खान सकिने भन्दै यहाँ अध्ययन गर्न आएको बताउनुहुन्छ ।
डोटीका सरोज भट्ट पनि अध्ययनकै लागि यहाँ आउनुभएको हो । उहाँलाई पनि लामो बाटो र इलामको चिसोले रोक्न सकेन । धरानकी कुमारी महत इलामको वातावरण अनुकूल र राम्रो पढाइ हुने भएर इलाम आएको बताउनुहुन्छ । पहिलो पटक पठनपाठन हुन थालेको पशु विज्ञान विषय पढेपछि राम्रो अवसर पाइने र इलामको चिसो वातावरणमा अध्ययन प्रभावकारी हुने उहाँको बुझाइ छ ।
साँखेजुङकै खेमराज दहालले यसअघि नै विज्ञान विषयबाट आइएसी गरिसक्नुभएको थियो तर सिटिइभिटीअन्तर्गत यहाँ पढाइ हुने थाहा पाएपछि उहाँ विषय नै परिवर्तन गरी पशु विज्ञानतर्फ होमिनुभएको हो । बाहिर बसेर पढ्नभन्दा पनि प्राकृतिकरुपमा सुन्दर आफ्नै जिल्लामा अध्ययन गर्दा थप प्रभावकारी हुने भनेर फर्किएको उहाँको प्रतिक्रिया छ । पछिल्लो समय प्राविधिक शिक्षातर्फ विद्यार्थीको आकर्षण थपिँदै गएकाले अध्ययनका लागि लामो दूरी पार गरेर आउनेको संख्या उल्लेख्य छ ।
पाँच वर्षदेखि संरचना निर्माणमा लागेको इन्स्टिच्युटमा भर्खरैदेखि मात्र पढाइ शुरु भएको हो । आउँदो वर्षमा कृषि र विज्ञान विषयमा पनि अध्ययन शुरु हुने इन्स्टिच्यूटका प्रमुख होमप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो । “शुरुमा कोटाअनुसार विद्यार्थी नआउने हुन् कि भन्ने चिन्ता भए पनि देशभरका विद्यार्थीको आकर्षण देखिएको छ,” प्रमुख होमनाथ अधिकारीले भन्नुभयो, “दक्ष शिक्षक पनि उपलब्ध भएकाले पठनपाठन सहज ढंगले अघि बढेको छ ।”
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता झलनाथ खनालसहित स्थानीयवासीले जग्गा निःशुल्क प्रदान गरेपछि सिटिइभिटीले इन्स्टिच्युटको भौतिक निर्माण थालेको थियो । इन्स्टिच्युटका लागि सबै पूर्वाधार तयार नभएकाले भने केही समस्या छ । हाल प्राज्ञिक भवनको पुस्तकालयमा पनि विद्यार्थीलाई पढाइँदै आएको छ भने प्रयोगात्मक कक्षा पनि तयारी हुन बाँकी छ । करिब रू ४० करोडको लागतमा सम्पन्न हुने सो इन्स्टिच्युटमा भौतिक निर्माण कार्य हालसम्म आधाभन्दा बढी मात्र काम भएको जनाइएको छ । एउटा प्रशासनिक भवन, प्रमुख निवास, काउसेट र पशु हस्पिटलको निर्माण कार्य पूरा भएको छ । शैक्षिक प्रयोजनका पाँचवटा भवन निर्माणाधीन छन् । माघसम्ममा सबै संरचना निर्माण पूरा हुने भएकाले त्यसपछि सहज ढंगले पठनपाठन हुने इन्स्टिच्युटका साइड इन्जिनियर रुपेश मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।
सुध्रदै इँटा उद्योग